Yakakurudzirwa mabhuku evakadzi: aya ndiwo atinoda | Zvazvino Zvinyorwa
Yakakurudzirwa mabhuku evakadzi
Kupa bhuku haisi nguva dzose zano rakanaka. Uye ndezvekuti, kana iwe usingazive iye mumwe munhu zvakanaka, unogona kukanganisa kana zvasvika pakupa mhando iyo inogona kunge isiri iyo yavanofarira. Panyaya yemabhuku akakurudzirwa vanhukadzi, hatireve neizvi kuti iwo anotarisana nemisoro yechikadzi, kana kune ayo akaumbwa nevakadzi. Asi iwo emanoveli ayo mukadzi anonyatsokoshesa kupfuura murume.
Uye ndizvo here, akakurudzira mabhuku evakadzi pane ese ekuravira: rudo, kuseka, kuita, kudakadza, kunakidza ... Zvakadii nezve isu titarise pane zvakanakisa zvatinogona kuwana muzvitoro zvemabhuku, zvese zvepanyama uye online? Zvirokwazvo kune mamwe awo anobata kutarisisa kwako.
1 Mabhuku akakurudzirwa kwazvo evakadzi
1.1 Ini handisi chikara
1.2 Mukadzi asina murume asina mukadzi muchena
1.3 Hessa. Rudo pakati pengano
1.4 Iyo nguva iri pakati pemaseams
1.5 Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: (Un) Anozivikanwa
1.6 Bonde rechipiri
1.7 Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: Mai Dalloway
1.8 Izvo apo neapo kugadzirwa
1.9 Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: Iyo Mhete
1.10 Yakatongwa karma
1.11 Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: Nguva yekuenda
Mabhuku akakurudzirwa kwazvo evakadzi
Kunyora bhuku hakusi nyore. Vamwe vanoti munyori anozvarwa ari mumwe, uye zvinoita sekufamba kunoita makore anozvikwenenzvera kusvika aita mabasa makuru ekurumbira. Ichokwadi ndechekuti inogona kana inogona kunge isiri yechokwadi, asi mumusika wezvinyorwa, kune mamirioni emabhuku uye mamirioni anodhindwa pagore, zvese nevabudisi uye, ikozvino, nevanyori pachavo. Izvi zvinoita kuti igutsikane zvekuti hazviite kuwana mabhuku akanaka pakati pevakawanda varipo.
Asi isu tinogona kukubatsira neizvi zvatinokurudzira kubva kuActualidad Literatura.
Ini handisi chikara
Mukundi weSuble Novel Award 2017, ini handisi chikara musoro wenyaya inosundira vatambi kusvika pamugumo. Izvi ndezvekutsakatika kwemwana mudiki munzvimbo yekutengesa uye nemararamiro ese evatambi anochinja nekuda kwemamiriro ezvinhu.
Ndima diki, uye ndizvozvo zano racho rinogona kukuita kuti ufunge, kunyanya kana iwe uri mutambi wevhidhiyo, mune inozivikanwa mutambo uyo kutanga kwake kunotanga seichi (mwana asipo munzvimbo yekutengesa).
Mukadzi asina murume asina mukadzi muchena
Unoda kuseka here? Zvakanaka saka iri ibhuku rako. Mariri iwe unowana Isa Pi, musikana ane degree rezvenhau uye uzivi uyo ane basa rinotora kwakawanda kwezuva uyezve rinobhadhara zvishoma. Chokwadi, hauna nguva yekuwana mudiwa, saka wafunga kuyedza kufambidzana nemaapp.
Asi chokwadi, mhedzisiro yacho ingave yakaipa kupfuura chokwadi chaicho.
Hessa. Rudo pakati pengano
Kuenda kubva mubhuku rekupepeta kuenda kune rakazvitsikisa (iro risingazivikanwe zvakanyanya asi kana iwe uchiriverenga rinokushamisa iwe). Iwe uchasangana nenoverengeka yakavakirwa paGranada. Kunyanya, muAlhambra. Uye chii chakakosha? Zvakanaka chii liye nyaya inobata neramangwana riri pedyo mune ngano dzinozivikanwa kwazvo (uye isingazivikanwe) yeGranada inoitika. Chakanakisisa pane zvese ndechekuti idzi ngano chaidzo, munyori haana kudzigadzira, asi akakwanisa kudzikwanisa nenzira yekuti dzese dzizadziswe.
Uye nyaya yacho? Iyo inotipa isu ine yakasimba kwazvo hunhu hwechikadzi, uyo akanyudzwa muhondo yeIslam. Pamwe chete naye, murume protagonist hunhu ane zvakavanzika zvakawanda uye zviitiko zviviri zvausingafungire.
Iyi nhoroondo ndeimwe yemabhuku akakurudzirwa evakadzi uko iwe kwaunowana inonakidza nyaya izere nehunyengeri, vasori uye njodzi. Imwe yeaya iwe yausingakwanise kutora kubva pamapeji.
Iye protagonist ndiSira Quiroga. Iye mugadziri wekupfeka uye anotama kubva kuMadrid kuenda kuTangier nemurume waachangobva kusangana naye. Ehezve, zvinhu hazvisi sezvaitarisirwa ipapo, uye anofunga kuenda kuTetouan uko kwaakawana yake yekudyira yekudyira. Nekudaro, kune zvimwe zvakawanda zvatisingakwanise kukuudza.
Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: (Un) Anozivikanwa
Iyi nhoroondo haina kuzivikanwa saHessa; asi isu tinotenda kuti inofanirawo kupihwa mukana. Mune ino kesi, liye nyaya inotizivisa kuvakadzi vaviri avo, pakutanga, vanoita sevasina kufanana. Zvisinei, sezvo nyaya ichienderera mberi, tinowana imwe pfungwa yekuona.
Uye zvakare, iri mune ramangwana, mugore ra2063.
Pakati pemabhuku akakurudzirwa evakadzi, haugone kupotsa imwe inoenderana nehukadzi. Uye chaizvo, iyi, inova chakakosha chikamu chekufamba uku. Chaizvoizvo, haisi rondedzero, asi iyo iyo iyo nhamba yevakadzi inokurukurwa pasi rese uye pamusoro pemakore, uye kuti inoonekwa sei kunze, mumagariro uye nenhoroondo, pamwe nekunze.
Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: Mai Dalloway
Sei tichitaura newe nezve iri bhuku? Zvakanaka, nekuti hunhu hukuru hunofungidzirwa nhasi chiratidzo chechikadzi.
Pano iwe uchasangana naClarissa, mukadzi akaroorwa kune akakosha murume, uye aine mwanasikana. Asi nzira yake yekuve haisi iyo yakajairika panguva iyoyo, asi anotomira munzira yaanotakura zuva rake zuva nezuva, mumaonero ake, nezvimwe.
Izvo apo neapo kugadzirwa
Kana izvo zvauri kutsvaga pakati pemabhuku akakurudzirwa evakadzi ingano pfupi, saka tinogona kukupa bhuku rino semuenzaniso. Icho chiri kuunganidzwa kwenyaya paunenge uine madingindira akasiyana siyana: rudo, godo, runako, hukama ...
Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: Iyo Mhete
Ruzivo rwekunakidzwa, uko mutambi mukuru, Cristina, gweta uye anogamuchira mhete mbiri pazuva rake rekuzvarwa: imwe kubva kumutengesi wemasheya, imwe kubva kune asingazivikanwe. Eheka, Chakavanzika chakagadzirwa nekutambira iyo yechipiri mhete inoita kuti atange kuongorora ndiani angave ari iye akaitumira, ine zano risinganzwisisike.
Karma inogara iri chinhu chatinotaura asi icho, kana chikatibata, hatisi kuseka, kunyanya kana zvisina kunaka. Zvakanaka, mubhuku rino uchave uine protagonist mukadzi, muterevhizheni, achibudirira kwazvo, anofira muchimbuzi. Uye zvechokwadi, mushure mekufa, munyori anozviberekazve, iye chete ndiye anozviita mumusvosve uye iwe unoziva izvozvo, kunze kwekunge uri mambokadzi, "usatsemhe kana kutemwa."
Yakakurudzirwa Mabhuku evakadzi: Nguva yekuenda
Iyi novel inoita kuti chero munhu awire murudo nehunyoro hwaunowana mairi. Uye ndeyekuti protagonist, Alice, Anoshandisa hupenyu hwake hwese achitarisira nekufunda nzou uye anongoerekana anyangarika. Kuziva zvinoitika kwaari, kuti mwanasikana wake anova sei munhu asina kujairika, uye kunyanya achiona imwe nzira yekunzwa kuva amai, zvinoita kuti iwe upedze bhuku iri pasina nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Yakakurudzirwa mabhuku evakadzi
Mabhuku aBenito Pérez Galdos